Xog: 20 sano xaatooyo ah: Xaqiiqda sababta loo dhisi la'yahay garoonka Garoowe - Caasimada Online
Home Warar Xog: 20 sano xaatooyo ah: Xaqiiqda sababta loo dhisi la’yahay garoonka Garoowe
Xog: 20 sano xaatooyo ah: Xaqiiqda sababta loo dhisi la’yahay garoonka Garoowe
Ku dhowaad 20-sanno kadib, inkastoo riyada in garoon diyaaradeed caalamiga ah ay Garoowe yeelato ay mar walba soo rumoobeyso, ayaa waxaa soo baxay war aan lagu farxin oo sheegaya in shaqada hagaajinta garoonku ay u xaniban tahay dhaqaale xumo darteed lixdii bilood ee la soo dhaafay. Xilligan aanu daabacayno maqaalkan, ma jirto wax shaqo ah oo ka socota garoonka diyaaradaha.
Waxaa la ogaaday in ay jirto sir la daboolayo oo ku saabsan dhaqaalaha mashruuca. Injineero khabiiro ku ah dhinaca dhismaha ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo $4 milyan oo ka mid ah maalgelintii loo isticmaalay shaqada dhismaha. Ma cadda sida iyo meesha lacagta inta dhiman oo dhan $2 milyan loo isticmaalay. Waxaa laga shanqariyey in dhaqaale dhan $2 milyan lagu bixiyay la-talin iyo arrimo kale oo muhiim u ah diyaarinta shaqada (indho-indhaynta, jaandhig, taxliilinta iyo baarida ciidda dhulka, iwm).
Waxaa sidoo kale jirta in sanadkii 2015-kii, Madaxweyne Cabdiweli uu Wasiirkii hore ee Maaliyada Mudane Shire Xaaji (oo hadda ah Wasiirka Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah) uu u magacaabay in uu Dowladda Puntland wakiil uga ahaado una metelo mashruuca dhismaha garoonka uuna si toos ah ula xiriiro ulana shaqeeyo shirkada la-talinta, dhex-dhexaadiyaasha iyo si la mid ah deeq-bixiyaha.
Xigasho: Warsidaha Puntland Mirror